စဉ်ဆက်မပြတ်အရက်ငွေ့ထိတွေ့မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်လပ်ပြီးနောက်အရက်ကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲမှု (၂၀၀၄) - Your Brain On Porn
စဉ်ဆက်မပြတ်အရက်ငွေ့ထိတွေ့မှု (2004) သာရှိပြီးပြည်ပမှပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြီးနောက် Enhanced အရက် Self-အုပ်ချုပ်ရေး
အရက် Clin Exp Res ။ 2004 Nov;28(11):1676-82.
O'Dell LE1, ရောဘတ် AJ, Smith က RT ကို, Koob gf.
အီသနောငွေ့ဖို့စဉ်ဆက်မပြတ်ထိတွေ့မှုကနေဆုတ်ခွာစဉ်ကတုံ့ပြန်တိုးမြှင့်အီသနော Self-စီမံခန့်ခွဲကြွက်ပြပွဲ။ ဒီလေ့လာမှုကပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအီသနောအခိုးအငွေ့နှိုင်းယှဉ်စဉ်ဆက်မပြတ်ထံမှဆုတ်ခွာစဉ်ကအီသနော၏ Self-အုပ်ချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။
စမ်းသပ်မှု 1 Self-စီမံခန့်ခွဲစဉ်ဆက်မပြတ်, ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း (အပေါ် 14 နာရီနှင့် 10 နာရီကိုချွတ်) ပြီးနောက်အီသနော, သို့မဟုတ်လုံးဝမ (ဆိုလိုသည်မှာထိန်းချုပ်မှု) အီသနောငွေ့ထိတွေ့မှုမှလေ့ကျင့်သင်ကြားကြွက်များတွင်အီသနော၏ Self-အုပ်ချုပ်ရေးဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ထိတွေ့မှုအချိန်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအုပ်စုသည်ထိတွေ့မှုနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်အုပ်စု4ရက်သတ္တပတ်၏ထိတွေ့ခြင်း2ရက်သတ္တပတ်လက်ခံရရှိလက်ခံရရှိကြောင်းထိုကဲ့သို့ဂိုးခဲ့သည်။ လေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးစမ်းသပ်မှုအခိုးအငွေ့ကနေဖယ်ရှားပြီးနောက်2နာရီကောက်ယူခဲ့ကြသည်များနှင့်တစ်ဦးချင်းစီကိုစမ်းသပ်အီသနောငွေ့၏ရက်ပေါင်း3မှ4အားဖြင့်ကွဲကွာခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှု2ငွေ့ထဲကနေဖယ်ထုတ်ပြီးနောက်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းငွေ့ဖြစ်စေ2သို့မဟုတ်2နာရီ၏ 8 ရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်အီသနော၏ Self-အုပ်ချုပ်ရေးဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှု3တိုးမြှင့ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းငွေ့၏2ရက်သတ္တပတ်အကြာတွင် saccharin Self-အုပ်ချုပ်ရေးကိုဆန်းစစ်နေဖြင့်အီသနောများအတွက်တုံ့ပြန်၏တိကျသောအမှာစကားပြောကြားသည်။
ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း၏ထိတွေ့ခြင်းလေးပတ်ထားတဲ့ထိန်းချုပ်မှုမှပထမဦးဆုံးဆုတ်ခွာဆွေမျိုးစဉ်အတွင်းအီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်တိုးနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ထိတွေ့မှု၏2ရက်သတ္တပတ်လက်ခံရရှိတိရိစ္ဆာန်များမှဆွေမျိုးကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါစဉ်ဆက်မပြတ်အုပ်စုသည်ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်မှုအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုကနေချွတ်စွပ်အရွယ်အစားကြီးနှင့်တဖြည်းဖြည်းသူတို့ရဲ့စမ်းသပ်မှုတွေကိုဖြတ်ပြီးတုံ့ပြန်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းထိတွေ့မှု၏နှစ်ပတ်လည်းအီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးတိုးမြှင့်နှင့်အခိုးအငွေ့ကနေဖယ်ရှားပြီးနောက်ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှု2သို့မဟုတ် 8 နာရီမကွာခြားချက်ရှိ၏။ ထိန်းချုပ်မှုကြွက်များနှင့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းထိတွေ့မှု၏သူတို့အားပေးသော2ရက်သတ္တပတ် Self-အုပ်ချုပ်ရေး saccharin မကွာခြားချက်ရှိခဲ့သည်။
ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းထိတွေ့မှုစဉ်ဆက်မပြတ်ထိတွေ့မှုမှအီသနောဆွေမျိုးများ၏ Self-အုပ်ချုပ်ရေးတွင်ပိုမိုလျင်မြန်စွာတိုးထုတ်လုပ်သောတွေ့ရှိချက်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းထိတွေ့အလွန်အကျွံအီသနော Self-အုပ်ချုပ်မှုများအတွက်တာဝန်ရှိ allostatic ဖြစ်စဉ်များ၏တစ်ဦးထက်ပိုလျင်မြန်တင်းမာမှုနဲ့ဆက်စပ်စေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။ ဆုတ်ခွာစဉ်ကအရက်သောက်အတွက်တိုးမြှင့်မောင်းသောယန္တရားများဆုတ်ခွာ၏2နှင့် 8 နာရီအကြာတွင်အလားတူဖြစ်ကြပြီးအီသနောမှသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖြစ်ပုံရသည်။